पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको ३ वर्षको साधारण सभा सम्पन्न « Artha Path
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको ३ वर्षको साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको चौथो, पाँचौं तथा छैठौं गरी ३ वर्षको वार्षिक साधारण सभा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर श्रेष्ठको सभापतित्वमा पौष २८ गते कोपुण्डोल, ललितपुरमा कम्पनीको साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । सभाबाट ४ वर्ष अविधिको लागि प्रतिनिधित्व गर्न ४ जना (१ जना महिला समेत) कम्पनीको संचालक सदस्यहरुमा संस्थापक शेयर धनी समुह–“क”को तर्फबाट प्रेम बहादुर श्रेष्ठ, नितिशा श्रेष्ठ, ध्रुब कुमार श्रेष्ठ र उदिप श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
कम्पनीको आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण एन.ए.आर.एस. एसोसियट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज लामिछानेले र आ.व. २०७७/०७८ को डि. कुमार एण्ड एसोसियट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दिपेन्द्र कुमारले तयार परेको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनहरुलाई सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको छ ।
साथै कम्पनीको आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण गर्न डि. कुमार एण्ड एसोसियट्सका चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट दिपेन्द्र कुमारलाई लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । कम्पनीका संचालक ध्रुव कुमार श्रेष्ठले आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनीले भोग्नु परेको समस्या, कम्पनीको आर्थिक स्थिति र सभामा उपस्थित भएका सबैलाई धन्यबाद दिए ।
शेयरधनीहरुबाट उठाइएका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट प्रदिप कुमार श्रेष्ठ र टिकाराम निरौलाले प्रष्ट पारेका थिए । शेयरधनीहरु अमिर दास रन्जित, उद्धव प्रसाद घिमिरे, ब्रम्हदेव शाक्य, अर्जुन कुमार ढुङ्गेल, शिव प्रसाद पौडेल, डम्वरु बल्लभ घिमिरे र शत्रुधन श्रेष्ठले आफ्ना अमूल्य राय सुझावहरु दिएका थिए ।
कम्पनीको यस आर्थिक वर्षहरुमा खर्च घटेको र आम्दानी सकारात्मक तिर गएको हुँदा नाफाको सुनिश्चतता गरी शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको ८ करोड ९३ लाखको हकप्रद विक्री खुल्ला, २० गतेसम्म नेप्सेमा कायम शेयरधनीहरुले आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडको हकप्रद शेयर विक्री खुल्ला गरेको छ । हाइड्रोपावरले आज माघ
८ करोड ९३ लाख रुपैयाँको हकप्रद निष्काशन गदै छ्याङदी हाइड्रोपावर
काठमाडौं । छ्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनीले माघ ११ गतेदेखि हकप्रद निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनिले
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको शेयर दोस्रो बजारमा कतिमा भयो कारोबार ?
काठमाडौं । स्पेशल प्रि ओपन सेसनमा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी को पहिलो कारोबार भएको छ
बरुण हाइड्रोपावरले स्थगित साधारण सभा बोलायो, शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने
काठमाडौं । बरुण हाइड्रोपावरले स्थगित साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनिले माघ १२ गते स्थगित